Dhirta 4 si loo yareeyo gaaska caloosha - TELES RELAY
ACCUEIL » Daawooyinka dabiiciga ah Dhirta 4 si loo yareeyo gaaska caloosha
Dad badan ayaa had iyo jeer la dhibtoonaada cilladaha dheefshiidka waxayna raadiyaan daaweyn si loo yareeyo gaaska caloosha iyo hiddo-wadayaasha kale. Taasi waa sababta ay waxtar u yeelan karto in wax laga ogaado geedaha daawada ka caawiya kahortaga iyo la dagaallanto si dabiici ah.
Kala soo bax maqaalkan dhirta 4 ugu waxtarka badan si loo yareeyo gaaska caloosha. Waxaan ka wada hadli doonaa faa'iidooyinka cilmiyaysan ee cilmiyaysan fennel, chamomile, qorfe, iyo sinjibiil. Baadh iyaga gadaal maqaalkan!
Dhirta si loo yareeyo gaaska caloosha
Gaaska xad-dhaafka ah ee ku ururay marinnada calooshadeena waxay sababi kartaa ciil xumo, dhejisid iyo calool-xanuun. Sababaha ayaa noqon kara kuwo badan oo kala duwanaan kara, laga bilaabo dulqaadasho ilaa cuntooyin gaar ah iyo jeermis buux dhaafiya xiidmaha.
Marka laga soo tago booqashada dhakhtarka haddii gaasasku ay soo noqnoqdaanwaxaan kaloo isticmaali karnaa dawooyin dabiici ah. Aakhirka wuxuu yareyn karaa gaaska caloosha isagoo leh wax uun fudud sida faleebo ee dhirta daawooyinka. Tijaabi oo hubi saamaynta ay ku leedahay dheef-shiidkaaga. Waxaan si faahfaahsan ugu sharraxnay qodobka intiisa kale.
Si aad u aragto: Dheefshiidka gaabis: 4 Aloe Vera Remedies
Marka hore, mid ka mid ah daawooyinka ugu caansan ee lagu yareeyo gaaska caloosha waa fennel. Abuurkeeda, xididdada iyo caleemo waa daaweyn dalal badan wanaajisaa dheefshiidka oo la dagaallama calool-fadhiga ka dib cunista.
Fennel ayaa leh qaar guryaha sunta ah. Waxay ka dhigan tahay isaga wuxuu fududeeyaa ka saarista gaaska marinka dheef shiidka hadii ay dhacdo ciil. Intaa waxaa sii dheer, waxay ka caawineysaa yareynta xanuunka caloosha. Waxay u oggolaaneysaa u bixidda waxayna joojin kartaa shubanka.
Ugu dambeyntiina, fennel ayaa ah daaweynta ugufiican yaree xoogga colic ee ilmaha. Hal daraasad ayaa soo jeedinaysa inaad isticmaasho saliid emulsion oo ka soo jeeda abuurkeeda carruurta ka hooseysa toddobaadyada 12. Daaweyntani waxay gacan ka geysan kartaa yareynta buufinta xiidmaha waxayna kordhin kartaa waxqabadka xiidmaha yar.
Sidoo kale akhri: Calaamadaha 10 ee bakteeriyada xad-dhaafka ah ee mindhicirka
2. Chamomile si loo yareeyo gaaska caloosha
La camomile waa faleebo had iyo jeer ka dhex jira armaajooyinka jikadaheena. Warshad dawadan ayaa ah mid nasasho dheelitiran taas ayaa badanaa la qaadaa marka neerfayaashu taabtaan caloosha. Ka sokow kaalmaynta gaaska, waxay sidoo kale wax ku ool u tahay ka hortagga shubanka, calool-xumada, lallabbo iyo matag, iyo sidoo kale isku-darka carruurta.
Ubax Tani waxaa loo isticmaali jiray ilaa wakhtiyadii hore si loogu daaweeyo xanuunnada caloosha ka dhaca Thanks to dheefshiidka, carminative, guryaha antispasmodic iyo daweynta. Waxaan u qaadan karnaa sidii faleebo ama loo adeegsan karo saliideeda muhiimka ah. Xaaladdan oo kale, waa in lagu qasi karaa saliidda cuntada (almond, qumbaha, saytuun, iwm.) Oo lagu sameeyaa duugista caloosha.
3. Caanlon ee Ceylon
Dhamaan noocyada qorfe, waxaan daneyneynaa halkan qorfe oo ah Ceylon (Cinnamomum zeylanicum). Runtii tani waa tan ugu xiisaha badan aragtida caafimaadka. Geedo Tani waa anti-bararka, antioxidant, antimicrobial, antidiabetic ama xitaa anticarcinogenic.
La qorfe, mahadsanid wanaagyadan, waxay ka dhigan tahay dawayn dheef-shiideed oo xoog leh. Waa mid wax ku ool ah ka hortagga iyo yareynta gaaska, cilada iyo calool-xumada. Intaa waxaa sii dheer, waxay sare u qaaddaa shaqeynta habboon ee beerka waxayna ka hortegi kartaa muuqaalka ku dul-nooleyaasha xiidmaha.
Sidee loo cunaa? Cinnamon waxay leedahay faa iidada ugu weyn ee la isticmaali karo oo ku badan suxuunta, cusbada iyo macaan labadaba. Waxaan kugula talineynaa inaad kudarto mashiinkaaga si loo siiyo dhadhan badan. Kama hadlin taabashada cinnamon dhammaan waxyaabaha aad kahesho.
Ugu dambayntiina, waxaan soo saari doonnaa uun udgoon asal ahaan laakiin maanta caan ka ah adduunka oo dhan. ah sinjibiil, waxaa loo yaqaanaa dhadhanka kulul, ubax iyo dhadhamiska, waa astaamihii caloosha ee caloosha laakiin sidoo kale daawo u ah dhowr nooc oo cuduro ah.
Heerka dheef-shiidka, xabagta gorgorku waxay yareyn kartaa gaaska caloosha. Waxay kaloo waxtar u leedahay daawee shuban oo ka hortag boogaha caloosha. Waxaan u qaadan karnaa mid cusub ama qalalan, faleebo ama juus ama kaabis.
Hada waad taqaanaa astaamaha dhirtaan dawooyinka loo yaqaan '4' dhirta kuwaas oo kaa caawin doona kahortaga iyo kahortaga urta. Hubso inaad had iyo jeer gacanta ku hayso si ay kaaga caawiso dheef-shiidka oo aad u hagaajiso tayada noloshaada.
Caawinta ciribtirka cisbitaalka 5 Remedies Home
Mintitka iyo bawdada labadaba waxay gacan ka geysan karaan yareynta calool-xumada, maaddaama ay u dhaqmaan sida tonic-ka dheefshiidka. Read more »
Boostada Dhirta 4 si loo yareeyo gaaska caloosha ayaa marka hore muuqatay Caafimaadkaaga hagaaji.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://amelioretasante.com/4-plantes-pour-soulager-les-gaz-stomacaux/
Tilmaamaha 6 Si Loogu Adkeeyo Qabow Guriga Si dabiici Ah - Hagaajinta Caafimaadkaaga